Welcome to Aayaha Nolosha » MADAXWEYNE KA QEYB GALAY AASKA LABADII GABDHOOD EE ISKU DHEGANAA
MADAXWEYNE KA QEYB GALAY AASKA LABADII GABDHOOD EE ISKU DHEGANAA
Maria iyo Consolata oo ahaa Labo gabdhood oo Mataano ah iskuna dhegenaa muddo aad u fog ayaa waxay ku geeriyoodeen dalka Tanzaniya kadib markii uu Wadnaha istaagay.
Labadaan Gabdhood oo si weyn looga yaqaanay dalka Tansaaniya ayaa da’adooda ahayd 22-sanno, waxayna iyagoo ku qanacsan isku dheganaantooda ay si wadajir ah u qabsan jireen howlahooda.
Gabdhahaas oo si farxad leh ku dhameystay waxbarashadoodii Dugsiga Sare, kuna raja weynaa in ay waxbarashada ka gaaraan ilaa heer Jaamacadeed, balse ay geeridu u timid kadib markii xanuun degdeg ah uu ku soo booday.
Labadaas gabdhood ayaa waalidkoodu waxa ay geeriyoodeen iyaga oo aad u yar yar waxaana Koriimadooda ka qayb qaatey Ha’yado Samafal oo ka jira dalka Tanzaaniya.
Geerida labadaas gabdhood ee isku dhegenaa Mataanahana ahaa ayaa waxaa geeridooda aad looga dareemay dalka Tanzaaniya, waxaana aaskooda ka qayb galay Madaxweynaha Wadanka Tanzaaniya oo u tacsiyadeeyey asxaabtoodii iyo qaraabadooda.
Labadaas gabdhood ayaa wadaagi jiray Sambabada iyoo Beerka, waxaana mid waliba ay lahayd wadne u gaar ah, waxaana ku soo booday xanuun aakhirkii sababay inay u geeriyoodeen, kadib markii ay wax ka qaban waayeen xanuunkooda dhakhaatiirka Isbitaalka ugu weyn dalka Tanzaaniya.